डाउनलोड गर्नुहोस् PES 2021 LITE को लागी Windows
डाउनलोड गर्नुहोस् PES 2021 LITE
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (41.54 GB)
डाउनलोड गर्नुहोस् PES 2021 LITE,
PES 2021 लाइट पीसी को लागी बजाउन योग्य छ! यदि तपाईं नि: शुल्क फुटबल खेल खोज्दै हुनुहुन्छ भने, eFootball PES 2021 लाइट हाम्रो सिफारिश हो। PES 2021 लाइट पीसी एक मुक्त PES फुटबल खेल को आशा को लागी ती के लिए शुरू भयो! फुटबल खेल eFootball PES 2021 लाइट, जो पीसी, कन्सोल र मोबाइल मा फिफा जत्तिकै राखिएको छ, अब स्टीममा डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ। PES २०२१ नि: शुल्क प्ले गर्न माथिको PES २०२१ लाइट डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
PES 2021 लाइट डाउनलोड गर्नुहोस्
PES 2021 LITE ले MyClub मोडका सबै सुविधाहरूमा असीमित पहुँच प्रदान गर्दछ। MyClub मा, तपाइँ खेलाडीहरू र प्रबन्धकहरू तपाइँको व्यक्तिगत खेल शैली मिल्दछ भर्ती गरेर आफ्नै सपना टीम बनाउनुहुनेछ। तपाईको टीलाई सुपरस्टारमा बदल्नुहोस् वा प्रतियोगितामा फाइदा लिन महापुरूष र अन्य शक्तिशाली खेलाडीहरू साइन इन गर्नुहोस्। MyClub ले यस वर्ष PES मा थपिएको शक्तिशाली नयाँ प्लेयर प्रकार Iconic Moment श्रृंखलामा पनि पहुँच प्रदान गर्दछ। यी खेलाडीहरूले हालको र पूर्व सुपरस्टारहरूको क्यारियरबाट अविस्मरणीय क्षणहरू खिच्दछन्, र उनीहरूले तपाईंलाई फिचर गरिएका प्लेयरहरूको बढी शक्तिशाली विविधताहरूमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिन्छ। यी दुई शक्तिशाली खेलाडी प्रकार तपाईंको टीममा थप्नुहोस् र प्रतिस्पर्धा हावी गर्नुहोस्!PES २०२१ LITE म्याचडे मोड, एक प्रतिस्पर्धी PvP मोडको साथ पनि आउँदछ जहाँ तपाईं वास्तविक विश्व फुटबल खेलहरू र कुख्यात प्रतिस्पर्धाबाट प्रेरित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुहुन्छ। म्याचडे मोड एक स्पोर्ट्स टूर्नामेन्ट पनि हो, eFootball को घर, जुन सबै सीप तहहरूको खेलाडी होस्ट गर्दछ। थप रूपमा, PES २०२१ LITE ले स्थानीय खेल र प्रशिक्षण मोडहरू समावेश गर्दछ जसले तपाईंलाई कम्प्युटर बिरूद्ध तपाईंको सीप सिक्न अनुमति दिन्छ। सम्पादन मोड पनि समावेश गरिएको छ, जसले तपाईंलाई पट्टि, प्रतीकहरू र टोलीको नामहरू अनुकूलित गर्न र क्षमता सिर्जना गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। सम्पादन मोडले तपाईंलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूद्वारा सिर्जना गरिएको डाटा आयात गर्न र असीमित विविध प्रकारका डिजाइनहरूमा पहुँच गर्न पनि अनुमति दिन्छ। तपाईको टीमलाई अनुकूलित गर्नुहोस् र शैलीमा क्षेत्र प्रविष्ट गर्नुहोस्! PES २०२१ LITE,यसले पूर्ण रूपमा भर्खरै सुरू गरिएको इफुटबल पोइन्ट कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दछ। eFootball पोइन्ट्स eFootball पोइन्ट्स कार्यक्रम को मुद्रा हो। पोइन्टहरू विभिन्न तरिकामा कमाउन सकिन्छ, खेलहरू खेल्न र ईफुटबल टूर्नामेन्टहरू समावेश गरेर। अंक कमाएपछि, तपाईं तिनीहरूलाई विभिन्न-खेल आईटमहरू र बोनसको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले इफुटबल पोइन्टहरू पनि कमाउन सक्नुहुन्छ २०२०-२१ ईफुटबलको सत्रमा भाग लिएर। यो डिसेम्बर मा शुरू हुने तालिका हो। ईफुटबल पोइन्टहरूमार्फत कमाउन सक्ने केही बोनसहरू तपाईंको टीमलाई सुदृढ पार्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसैले ईफुटबलमा सम्मिलित हुन नबिर्सनुहोस्। सकेसम्म धेरै अंक कमाउनका लागि खोल्नुहोस्! PES २०२१ LITE सँग पनि कोनामीका आधिकारिक साझेदार एफसी बार्सिलोना, एफसी बायरन मन्चेन, जुभेन्टस, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनलको धेरै इजाजतपत्र सामग्री छ। यो,हाम्रो प्रत्येक पार्टनर क्लबहरू, जुन विवरणमा ध्यान दिएर-खेल पुन: तयार गरिन्छ, उनीहरूको आफ्नै स्टेडियमहरू पनि समावेश छन्।
PES २०२१ LITE बजाउन योग्य मोडहरू
अनलाइन टूर्नामेंट (विशेष प्रतियोगितामा सीमित)
मोड मोड (स्टीम र PS4 मात्र)
PES २०२१ LITE प्ले योग्य टीमहरू
टोलीहरू जुन एफसी बार्सिलोना, एफसी बायरन मन्चेन, जुभेन्टस, म्यानचेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, स्थानीय खेल र सँगै मोडहरूमा खेल्न सकिन्छ। अन्य सबै मोडहरूले तपाईंलाई खेलको पूर्ण संस्करणको रूपमा उहि क्लबहरू चयन गर्न अनुमति दिन्छ। MyClub डाटा PES २०२१ र PES २०२१ LITE को पूर्ण संस्करण बीचमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। दुबै नि: शुल्क संस्करण र PES २०२१ को पूर्ण संस्करणमा सबै प्लेयरहरू सबै प्ले गर्नुहोस्। उही सर्भरमा, जसको अर्थ होईन कृपया नोट गर्नुहोस् कि मास्टर लिग सहित केहि मोडहरू केवल खेलको पूर्ण संस्करणमा उपलब्ध छन्। केही क्लबहरू PES २०२१ LITE मा केहि मोडहरूमा बजाउन योग्य छैनन्। सबै ईफुटबल मोड प्रतियोगिताहरू प्ले योग्य छैनन्। PES २०२१ LITE। ओभिड १ of को चलिरहेका प्रभावहरूका कारण केही देशहरूले अन्तिम टिमको व्यवस्थामा अन्तिम मिनेट परिवर्तनहरू लागू गर्न सक्दछन्। फलस्वरूप,सबै टूर्नामेंट विवरण सूचना बिना परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
PES 2021 LITE चश्मा
फाईल आकार: 41.54 GB
पछिल्लो अद्यावधिक: 25-01-2022
डाउनलोड गर्नुहोस्: 24,426